Simba remafungu ekugadzira simba | Green Renewables
Adriana | | Wave Simba, Renewable simba, Nyowani matekinoroji
Kufamba kwemasaisai egungwa narwo simba ine mikana yakawanda yekugadzira magetsi Rudzi urwu rwesimba rwunonzi wave simba.
Izvo zvakanaka kune nyika dzine mahombekombe makuru munzvimbo dzadzo.
Ichi chinyorwa cha simba rinodzokororwa uye rakachena iyo inofungidzirwa kuve nekwanisi yekugadzira zviuru zviviri zvemagetsi.
Kune nzira dzakasiyana dzekugadzira simba nekufamba kwemasaisai egungwa. Iyo yakanyanya kushandiswa kusvika parizvino hurongwa hunosanganisira magetsi emagetsi anowanikwa mugungwa anofambisa pisitoni uye izviwo, jenareta inogadzira simba remagetsi. Magetsi anouya pasi kuburikidza netambo dzepasi pemvura.
MuEngland mudziyo unovimbisa zvikuru wakagadzirwa kuti ubate nesimba remasaisai anonzi anaconda.Iri chubhu refu refu yerabha yakavharwa kumativi ese nemvura mukati. Inonyudzwa pakati pemakumi mana kusvika zana emamita.
Kuvhiya kwacho kwakareruka sezvo masaisai achifamba nechisimba, chubhu izere nemvura inofamba iyo inodzvanya kuti ibude kune kumucheto kune turbine inotanga kushanda nesimba iri uye inogadzira magetsi anobva atumirwa netambo pasi.
Kubatsira kwechiratidziro ichi ndechekuti yakachipa pane mamwe marudzi ehunyanzvi, mutengo wekugadzirisa wakaderera uye inogona kuramba yakamira nekufamba kwenguva.Portugal ndeimwe yenyika dzinoshandisa nzira iyi uye inoronga kuiwedzera munguva pfupi iri kutevera.
Kunyangwe iyo technology wave Inoshaya kumwe kusimudzira kuitira kuti uwane mibairo iri nani uye nemitero yakaderera yekudyara, sezvo iri kumusoro kusvika ikozvino
Asi nyika zhinji uye dziri kuwedzera kufarira sosi iyi yesimba, inova nechokwadi chekuti mari inoramba ichiitwa mukuvandudza kana kugadzira tekinoroji inokwanisa kushandisa simba rinogadzirwa nemafungu yakaderera zvakatipoteredza kukanganisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Wave Simba » Simba remafungu ekugadzira simba
Ndini Esteban Thomas, ndaida kukuudza kuti nhasi ndadzidza zvinhu zviviri zvitsva ... ndinofunga ndashandisa nguva yangu zvakanaka. Ndinovimbisa kuramba ndichifambira mberi uye ndichitenda muvakomana vemu «office» ...
Pindura kuna Ethomas
Iyi nzira nyowani yekugadzira simba inonakidza kwazvo, inzira yandinotarisira kuti nyika zhinji dzichasarudza kuburitsa, kunyanya nekuti zvakakosha kuti titange kutarisira nyika yedu / Venezuela.
Simba zviwanikwa nekusimudzira hupfumi
Bhazi rezvakatipoteredza mumaguta eSpain